Muuri News Network » Ciidamada Maamulka Marka oo Gaaray Bartamaha Magaalada Marka iyo Mooryaanta oo lagala Wareegay Dhismayaal Dhowr ah
Ciidamada Maamulka Marka oo Gaaray Bartamaha Magaalada Marka iyo Mooryaanta oo lagala Wareegay Dhismayaal Dhowr ah
Dec 12, 2015 - Comments off
Waxaa Faah-faahino dheeraad ah laga helayaa dagaalka ka socda Magaalada Marka oo ah mid laysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan isla mar ahaantaana Soconaya ilaa iyo hada.
Faah-faahinada dheeraadka ah ee dagaalka laga helayo ayaa xaqiijinaya in 4 ka-tirsan maleshiyaadka Mooryaanta ah lagu dilay dagaalka, halka dhanka Maamulka Marka looga dilay dagaalka Hal Ruux.
Sida Wararka la helayo ay tilmaamayaan in Maleeshiyaadka Maalmahii ugu dambeeyay dhibaatada ka waday Magaalada Marka lagala wareegay dhismayaal dhoowr ah, oo horey ay difaac ugu jireen.
Dhismayaasha ay la wareegeen Maamulka Marka oo garab ka helaya Dadka deegaanka waxaa ka mid ah Xarunta Swiss Kaalmo, waxaana hada weli uu dagaalka ka socdaa Guriga uu xooga ku dhistay Mooryaan Nuur Magdi.
Dhanka kale Sarkaalka hogaaminaya Ciidamda Maamulka Marka oo lagu magacaabo Cusmaan Afweyne ayaa Muurinews u Xaqiijiyay in hada Ciidamadooda ay ku sugan yihiin Bartamaha Magaalada Marka, Mooryaantana laga dajiyay dhisamayaal Dhoowr ah.
Waxaa uu sheegay Sarkaalkan in weli xabada ay ka soconeyso dhanka Sarta Burcadbadeeda, halkaasoo Ciidamada Maamulka ay ku hareereysanyihiin.
Dhawaan ayey aheyd kadib markii Gudoomiyaha Marka Xasan Cumar Macallin uu Wacad ku maray in uu ka sifeyn doono Mooryaanta dhibaatada ka wada Magaalada Marka, Shacabka Magaalada Marka-na ay arki doonaan wax ay ku farxaan.